September 4, 2021 - Celegroup
အဲယားကွန်းခန်းမှာ အနေများသူတွေ သတိထား လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် (၄)ချက်…
September 4, 2021 cele group 0
အခုလို ပူလောင်အိုက်စပ်တဲ့ နွေရာသီမှာ အဲယားကွန်း (Air Conditioner) တွေဟာ အိမ်တိုင်းနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာ မရှိမဖြစ် နေရာယူလာပါတယ် ရာသီဥတုကြောင့် ပူလောင်နေတဲ့ အခြေအနေတခုကို အဲယားကွန်းတွေက လျှော့ချပေးနိုင်တာကြောင့် အပူဒဏ်ကနေ သက်သာတယ်ဆိုပေမယ့် အဲယားကွန်းခန်းထဲမှာပဲ အနေကြာလာရင်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အဲယားကွန်းခန်းထဲမှာပဲ အနေများသူတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေ မဖြစ်ပေါ်ရအောင် သတိပြုလိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် (၁) ရေများများသောက်ပါ အဲယားကွန်းခန်းထဲမှာ အနေများခြင်းဟာ […]
လောကဓံကိုရင်ဆိုင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်အောင် ထားတတ်ဖို့လိုတယ်…
ပျော်အောင်နေပါ ။ အငိုနဲ့ စခဲ့တဲ့ဘဝမှာ ဆက်ပြီးပဲ ငိုနေလို့မရဘူး … လောကဓံဆိုတာ လူတိုင်းကြုံရတဲ့အရာပါ ငါ့ကျမှ ကံဆိုးလေခြင်းဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ကမ္ဘာပျက်နေသလိုမျိုး ခံစားမနေပါနဲ့ ။ အဆင်မပြေမှုတွေကြားမှာ အဆင်ပြေအောင်နေတတ်တာလဲ ရင့်ကျက်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ ။ ပျော်ရာမှာ မနေရ တော်ရမှာနေရဆိုတဲ့စကားလဲ ရှိတယ်မဟုတ်လား ။ နေရတဲ့အရပ်တိုင်းက ပျော်ရလိမ့်မယ်လို့အာမခံချက်ပေးမထားတာ သိထားဖို့လိုပါတယ်.. ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကို လက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ အင်အားရှိနေဖို့လိုတယ် ဒီလိုလက်သင့်ခံနိုင်တဲ့အင်အားရှိနေမှ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကို ပျော်အောင် နေဖို့အခွင့်အရေးတွေ […]
ငွေတစ်ရာ နှစ်ရာဆိုတာ ပိုနေတဲ့အခါ မသိသာပေမယ့် လိုနေတဲ့အခါအရမ်းသိသာတယ်
တစ်ချိန်ကငွေကို ရှိရင်ရှိသလိုသုံးခဲ့ဖူးတယ်။ လက်ထဲမှာ ငွေလေးရှိတာနဲ့ လိုအပ်တာရော မလိုအပ်တာတွေကိုရော အကုန်စုပြုံပြီးဝယ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အစားအသောက်ဆိုလည်း မကုန်မခမ်းတွေဝယ်ပြီး မကုန်တဲ့အခါလွှင့်ပစ်လိုက်တာလဲရှိတယ်။ အဝတ်အစားတွေပေါနေရဲ့သားနဲ့လည်း တစ်ထည်ပြီးတစ်ထည်ဝယ်တယ်။ ချွေတာစုဆောင်း သူဌေးလောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ကငွေကိုချစ်မှ ငွေကလည်းကိုယ့်ကိုချစ်ပြီးကိုယ့်အနားမှာနေမှာပါ။ ကိုယ်ကငွေကို တန်ဖိုးမထားပဲ ရှိရင်ရှိသလိုသုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ အရေးအကြောင်းကြုံတဲ့အခါသုံးစရာမရှိပဲ ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ငွေလေးကို မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ဖြုန်းနေမယ့်အစားတစ်ခုခုကြိုးစားလုပ် ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးမြှပ်နှံလိုက်တာကမှ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ငွေကိုသိမ်းပြီးသားလည်းဖြစ်သလို တိုးပွားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်။ ရေရှားတဲ့နေရာမှာနေဖူးမှ ရေတစ်စက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိသလို ငွေရှိတဲ့အချိန်တုန်းက ထင်သလိုသုံးခဲ့ပြီး ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှ ငွေရဲ့တန်ဖိုးကို ပိုနားလည်လာခဲ့တယ်ငွေတစ်ရာနှစ်ရာ ပိုနေတဲ့အခါမှာမသိသာပေမယ့် လိုနေတဲ့အခါ […]
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကို လုံးဝ ထည့်မထားသင့်တဲ့ အရာတွေနဲ့ လာဘ်မပိတ်အောင် သတိပြုရမယ့် အချက် (၄)ချက်
သင့်ရဲ့ငွေကြေးကံကောင်းမကောင်းဟာ သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်ဆိုရင် ယုံနိုင်မလား။ တချို့ကိစ္စတွေက ယုံဖို့ခက်ပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ အကျိူးသက်ရောက်မှုရှိနေတတ်တာကိုတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ဒီတော့ ငွေကြေးကံကောင်းဖို့ သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ မလုပ်သင့်တဲ့အချက်နဲ့လုပ်သင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဘောက်ချာအတိုအစတွေပိုက်ဆံအိတ်ထဲမထည့်ထားပါနဲ ဈေးဝယ်ပြီးနောက်ရလာတဲ့ဘောက်ချာတွေ၊ ဖြတ်ပိုင်းအတိုအစတွေ၊ စာရွက်ခေါက်တွေကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်သိမ်းထားတာမျိုးက လာဘ်တိတ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒါတွေကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်မထားမိဖို့ သတိပြုပါ။ သေချာရှင်းလင်းပါ။ (၂) ပိုက်ဆံတွေကိုစနစ်တကျစီထည့်ပါ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲပိုက်ဆံတွေထည့်တဲ့အခါ လုံးထွေးပြီးထည့်ထားတာမျိုး၊ တွန့်ကြေနေတာမျိုးတွေမဖြစ်စေပါနဲ့။ ပိုက်ဆံတွေကို ပြန့်နေအောင်ထားပြီး အစဉ်တကျထည့်ပါ။ ကိုယ်သုံးတဲ့ပိုက်ဆံကိုလည်းလေးစားမှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ […]
ဆီးချိုရောဂါရှိတဲ့ မိဘတို့အတွက် သတင်းကောင်း ပါ “ ခရေရှိလျှင် ဆီးချိုကို ကြောက်စရာမလိုတော့ပါ…
ဆီးခ်ိဳေရာဂါရှိတဲ့ မိဘတို႕အတြက္ သတင္းေကာင္း ပါ “ ခေရရွိလွ်င္ ဆီးခ်ိဳကို ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ပါ ဦးဇင္းရဟန္းအစ္မတစ္ေယာက္က အသံတိတ္ လူသတ္ေရာဂါလို႔နာမည္ႀကီးတဲ့ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ရွိပါတယ္။ေငြေၾကလည္းျပည့္စုံေတာ့ အဂၤလိပ္ေဆးေတြေသာက္ေနရပါတယ္ တစ္ခါဝယ္ရင္ ေသာ င္း ဂ ဏန္း သိန္းဂဏန္းထိကုန္က်ပါတယ္။ အသက္ကို ေငြနဲ႔ဝယ္ထားရတယ္ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ဒီေဝဒနာကိုခံစားေနရတာ ဦးဇင္းကို သိကၡာမထပ္ခင္ကဆိုပါေတာ့ အခုဆို ၆ ႏွစ္မကေတာ့ပါဘူး။ ဦးဇင္းလည္းဒီီေဝဒနာခံစားေနရတာ မၾကည့္ရက္ လို႔ ေငြေၾကးလည္းသက္သာ ဆိုးက်ိဳးလည္း မျဖစ္မယ့္ […]
အလွဆုံးတိုက္အိမ္ပိုင္ရွင္ သူေဌးမႀကီး ေဒၚဝိုင္းရဲ႕ ေၾကကြဲစြာနဲ႔ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရတဲ့ ျဖစ္ရပ္… နင္လားဟဲ့ ေလာကဓံ…အဲဒီအဖြားနာမည္က ေဒၚဝိုင္း လို႔ေခၚတယ္။ငယ္စဥ္တုန္းကေတာ့ လယ္နဲ႔ယာနဲ႔တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ ေနႏိုင္တဲ့သူ ေတာသူေဌးေပါ့ေလ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ဝန္းက်င္က သူ႔အိမ္ဟာ ကြၽန္ေတာ့္ နယ္ၿမိဳ႕ေလးရဲ႕ အလွဆုံးနဲ႔ ပထမဆုံးေသာ တိုက္အိမ္ပဲ..မွန္ေတြတပ္ထားတဲ့ သူ႔အိမ္ျပတင္းေပါက္ေတြကို တစ္ၿမိဳ႕လုံးကလူေတြ အထူးအဆန္းလုပ္ၿပီး သြားၾကည့္ၾကတာကိုကြၽန္ေတာ္မွတ္မိေနေသးတယ္။ သူ႔မွာ ေမာင္မိုးနဲ႔ မေအးဆိုတဲ့ သားသမီးႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္..စီးပြားေရးေလးက အတန္ငယ္ေျပလည္ေတာ့ သားနဲ႔သမီးကို […]
အွန်လိုင်းပေါ်မှာမြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တစ် နေ့ကို 10 ကားလောက် နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတယ်…
ခုေနာက္ပိုင္း အြန္လိုင္းေပၚမွာျမန္မာစုံတြဲ ကိုယ္တိုင္႐ိုက္ေတြ တစ္ေန႔ကို 10 ကားေလာက္ ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႕ေနရတယ္/.. အြန္လိုင္းေပၚမွာျမန္မာစုံတြဲ ကိုယ္တိုင္႐ိုက္ေတြ တစ္ ေန႔ကို 10 ကားေလာက္ ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႕ေနရတယ္ အြန္လိုင္းေပၚမွာ…ျမန္မာစုံတြဲ…ေခ်ာင္းရိုက္ေတြ…ကိုယ္တိုင္ရိုက္ေတြ တေန႔ကို…၁၀ကားေလာက္.. ေန႔စဥ္ ျမင္ေတြ႕ေနရတယ္၊အဲဒီကာယကံရွင္ ေတြရဲ့သားစဥ္မ်ိဳးဆက္..အဲဒီကားေတြ ျမင္ေတြ႕ေနၾကရမွာပါ တခ်ိန္မွာ…ငါ့အေဖေတြ…ငါ့အေမေတြဆိုၿပီး…သူတို႔သားသမီးေတြလည္းျမင္ေနၾက ရမွာဆိုေတာ့ေတြးၾကည့္ရင္….ျပသာနာအႀကီးႀကီးေတြပါ။ မသိနားမလည္တဲ့ ညီမေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ျမင္ရေတြ႕ရတာေတြ စိတ္မေကာင္းစရာေတြမို႔ပါ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ခ်က္ေဘာက္ရီကြက္စ္ထဲမွာ လာအႀကံဉာဏ္ေတာင္းၾကတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္အမ်ားစုမွာ တူညီတဲ့အေၾကာင္းတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ခ်စ္သူနဲ႔ အတူေန […]
ကိုယ္နဲ႔တစ္ညစာေပ်ာ္ဖို႔ေခၚလာတဲ့ အေပ်ာ္မယ္ေလးကို လမ္းေဘးကသူေတာင္းစားကိုေပးၿပီး ေပ်ာ္ခိုင္းလိုက္ေသာအခါ
ဘားတခုထဲကေန အရက္ေတြ အရမ္းကိုမူးေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ အရက္တစ္လံုး နဲ႔ ညည့္ဌက္ကေလးတစ္ေယာက္ ဆြဲျပီး ထြက္လာသတဲ့…. အဲ့ဒီမွာပဲ ဘားအေရွ႕မွာ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနတဲ့ သူေတာင္းစား တစ္ေယာက္က ဗိုက္အရမ္းဆာေနတဲ့အတြက္ေႀကာင့္ သူ႔ကို အစားစားဖုိ႔ ေငြစေႀကးစ အနည္းငယ္ေလာက္ စြန္႔ႀကဲဖုိ႔ အမူးသမားကို ေတာင္းရမ္းပါေတာ့သတဲ့…. အဲ့ဒီမွာပဲ အမူးသမားကလည္း ငါ့မွာ ပိုက္ဆံေတာ့ မက်န္ေတာ့ဘူး… မင္း ေသာက္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေရာ့..ငါ့ အရက္ သာ ေသာက္လိုက္ေတာ့လို႔ အရက္ပုလင္း […]
သင့်လက်ထဲမှာပိုက်ဆံမပြတ်အောင် သေချာပေါက် ငွေစုမိစေမည့် နည်းလမ်း (၄) မျိုး…
တစ်လတာဝင်ငွေကို စုမိဖို့နေနေသာသာ လကုန်ခါနီးတာနဲ့ လက်ထဲငွေမလောက်တာမျိုး ကြုံကြိူက်ဖူးမှာပါ။ ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက် ငွေယိုပေါက်တွေကို သေချာရှာဖွေပြီး လစဉ်စုမယ့်ငွေပမာဏကို (အနည်းအကျဉ်းဖြစ်စေ)သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ မြင်သမျှ ဝယ်ချင်နေပါက သင် တပြားမှ စုမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ငွေကိုစုဆောင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်…(1) ၅၀/၃၀/၂၀ နည်း – ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိပေမယ့် ငွေမစုမိသူများအတွက်သာရည်ရွယ်ပါတယ် …။ သင့်တစ်လတာဝင်ငွေကို ၃ ပုံခွဲလိုက်ပါ …။၅ဝရာနှုန်းကို လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်အတွက် (ထမင်းစရိတ်၊ အိမ်စရိတ် ၊ဘေလ်စသည်) ဖယ်ပါ …။၃ဝရာနှုန်းကို သိပ်အရေးမကြီးပေမယ် လိူအပ်သောအရာများအတွက်သုံးစွဲပါ […]